Bemhapemha - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Bemhapemha chinhu chinoramba firimu iri zvemapuranga pamusoro pemvura iri chinhu akadzivirirwa kana yakashongedzwa uye zvinogona zvakasimba vasiyana unhani. Hazvina viscous mvura, dzaiwanzogadzirwa nebwe, mafuta, uye emulsion kana pasina pigments, fillers, yokuvirisa, zvinoita zvokufembedzwa kana mvura.
Shure kwenguva yakareba kukura, unhani kunonyanya kunzwisisa. Kuti zviite basa uye kushandiswa, siyana kupatsanura nzira coatings dzakaumbwa pamwe yayo maitiro. Pari, vakawanda vakagamuchira unhani kupatsanura ndeinotevera:
Maererano nemhando film-dzichiumbwa zvinhu, unhani inogona rakakamurwa alkyd nebwe unhani, polyurethane unhani, emulsion unhani, nitrolacquer, acrylic unhani, epoxy nebwe unhani, etc.
Maererano zvakasiyana mashandisirwo, rinogona rakakamurwa kupendwa lacquer, huni lacquer, motokari unhani, motokari kupenda, zvomumvura pendi, girazi unhani, simbi unhani, etc.
Maererano siyana nokuomesa nzira, unogona kukamurwa kuva mhepo-nokuomesa kupenda, stoving varnish, UV achirapa unhani, etc.
Maererano muchimiro unhani, rinogona rakakamurwa upfu unhani, mvura unhani.
Maererano basa unhani, rinogona rakakamurwa pakuitisa pendi, insulating pendi, Anti ngura kupenda, kupisa nemishonga pendi, etc.
Longxin kupa midziyo vakawanda unhani gadzira akadai AkzoNobel, MAYDOS, Nippon pendi uye zvichingodaro.
Vanokurudzira zvokushandisa unhani Kugadzirwa: YS akatevedzana hydraulic matatu chinotenderera paguyo, WSJ akatevedzana chinjikira nechomukati-kutonhora zvizere basa bead paguyo, WSD dzino kutsanya aibuda jecha paguyo, WSS akatevedzana chinjikira uye chigayo, WSK dzino High-viscosity vakanaka-chinja bead chigayo
Product Line: unhani / chemishonga / tupukanana / herbicide chigadzirwa mutsetse